မည်သည့်မေးလ်အတွက်အီးမေးလ် App | Android အတွက်ဒေါင်းလုပ် APK
ပင်မစာမျက်နှာ » အီးမေးလ် & SMS ကို Apps ကပ » မဆိုမေးလ်များအတွက်အီးမေးလ် App ကို
လှပသောဒီဇိုင်း၊ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များ၊ လျှပ်စီးမြန်နှုန်း၊ အဆင့်မြင့်လုံခြုံရေး - စွမ်းအားသစ်တစ်ခုတွင် Outlook & အခြားသူများအတွက်အီးမေးလ်အက်ပလီကေးရှင်း!
လျင်မြန်စွာနှင့်လွယ်ကူစွာဝင်ရောက်ခွင့် သဘောတား နှင့် , Hotmail အကောင့်အကောင့်များ! အီးမေးလ်ကိုဖတ်ပါ၊ ဖတ်ပါ၊ ပြန်ကြားပါ၊ ဓာတ်ပုံများပို့ပါ၊ ပူးတွဲပါဖိုင်များထည့်သွင်းကြည့်ပါ - သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိနေပါ။ သင်၏ဖုန်း၊ တက်ဘလက်သို့မဟုတ်စမတ်နာရီများ၌သင်၏ Outlook အီးမေးလ်ကိုအထိရောက်ဆုံးနည်းဖြင့်စီမံရန်အင်္ဂါရပ်အသစ်များကိုတွေ့ကြုံခံစားပါ။
- အချိန်မီ စိတ်ကြိုက် push သတိပေးချက်များ အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ဥပမာ၊ 'အလုပ်လုပ်' အီးမေးလ်လိပ်စာကို 'မနှောက်ယှက်ပါနှင့်' 21 မှ 00 မှ7- 00 သို့သတ်မှတ်ပါ
- user-ဖော်ရွေဒီဇိုင်း: သင်အလံလွှင့်ချင်သည်ဖြစ်စေ၊ Mark ကို spam အနေနှင့်ဖြစ်စေ၊ တစ်ကြိမ်တည်းသောအီးမေးလ်တစ်စောင်သို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းကိုသာဖျက်ပစ်ခြင်းစသည်တို့ကိုသင်စဉ်းစားရန်မလိုအပ်ပါ။
- သန့်ရှင်းပြီးသပ်ရပ်သောစာပုံး avatars ကိုဆက်သွယ်ပါ နှင့် enable လုပ်ဖို့ option တစ်ခု အီးမေးလ်အကြောင်းအရာ (စကားဝိုင်းအားလုံးသည်အတူတကွသပ်သပ်ရပ်ရပ်ပြသထားသည်)
- အဆင်ပြေပါတယ် ရှာဖှေ အီးမေးလ်များကိုလျှပ်တပြက်တွင်ရှာဖွေရန်ကူညီရန်နေ့ရက်၊ လက်ခံသူ၊ အကြောင်းအရာ၊ မဖတ်ရသေးသော၊
- ကိုယ်ပိုင် filter များ အဝင်အီးမေးလ်များကိုတိကျသောဖိုလ်ဒါများသို့အလိုအလျောက်ရွှေ့ပြောင်းရန် (သို့) ဖတ်ပြီးသည့်အတိုင်းမှတ်သားရန်
- မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြု၍ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ထားသည် PIN နံပါတ်
သင်၏ဖြည့်စွက်နိုင်သည့်အဓိကအီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးကို၎င်းအပလီကေးရှင်းသည်တစ်နေရာတည်းတွင်တစ်နေရာတည်းတွင်လည်းပံ့ပိုးပေးသည် Microsoft Outlook၊ Hotmail, MSN Mail, Gmail, Yahoo, AOL, GMX သို့မဟုတ်မည်သည့် POP / IMAP / SMTP- Enabled စာတိုက်ပုံး။
အကယ်၍ သင်သည်မည်သည့်ပြproblemsနာကိုမဆိုကြုံတွေ့ရပါက outlook@mailapps.me သို့အီးမေးလ်ပို့ပါ။ သင့်အားအချိန်မီကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါလိမ့်မည်။
အရေးကြီး: ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးတရား ၀ င်မဟုတ်သော Outlook အီးမေးလ်လျှောက်လွှာတစ်ခုဖြစ်သည်။
13.03 ကို MB